Mogadishu Journal » 2019 » March » 14
Mjournal -Puntland ayaa usoo jeedisay dowladda federaalka in laga qaybgeliyo wadahadallada Soomaaliland, xilli wadahadallada ay muddo hakad ku jiraan. “Sida uu qabo dastuurka federaalka ahi, gorgortan iyo heshiis walba oo saamaynaya dowladaha xubnaha ka ah dowladda...
Mjournal :-Inta la xaqiijiyay labo ruux ayaa ku dhaawacantay kadib markii qarax miino uu la kacay gaari Maraayay dhanka bari ee degmada Galdogob ee gobolka Mudug sida ay sheegeen mas’uuliyiinta degaanka. Gaariga Qaraxu haleelay ayaa noociisa lagu sheegay Iska’rogo, waxaana la...
But President Trump vows to veto the move as pressure intensifies on UAE-Saudi coalition to end the devastating war. Washington, DC – The US Senate voted 54-46 to block further involvement by the US military in the war in Yemen, where Saudi and UAE bombings conducted with...
Kenyan soldiers in Somalia on Wednesday killed three Al-Shabaab terrorists and captured one in a gunfight in Bura Hache. The Defence ministry issued a statement saying the troops, who are part of the African Union Mission in Somalia (Amisom), confiscated two AK 47 rifles, one SLR...
Mjournal :-Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ku dhawaaqay in 19-ka bisha March uu dalka Ghana ka dhici doona Wada hadalada dowladda Soomaaliya iyo Maamulka Somaliland. Muuse Biixi ayaa sheegay in Madaxda dowladda Soomaaliya ay diidan yihiin wada hadaladaas. Ma jirto...
Mjournal :-Ciidanka difaaca Kenya ee KDF ayaa sheegay in ay dileen Saddex xubnood oo ka tirsanaa Al-Shabaab mid kalena ay nolosha ku qabteen, markii uu kabada dhinac dagaal ku dhex maray degaanka Buulo-Xaaji oo ka tirsan Gobolka Gedo. Af-hayeen u hadlay Ciidanka difaaca Kenya oo...
Mjournal :-Qaraxaan ayaa Goordhow waxaa jugtiisa laga maqlay degmooyin ka tirsan Gobolkan Banaadir,waxaana uu ka dhacay agagaarka Isgoyska Shaqaalaha Wadada Maka almukarama ee Magaalada Muqdisho. Wararka aan heleyno ayaa waxa ay sheegayaan in Gaari Saruf ah oo lagu soo xiray...
Mjournal :-Taliska Ciiddanka Maraykanka ka jooga Qaaradda Afrika ee AFRICOM waxay sheegteen inay 2 Dagaalyahan ku dileen duqeyn ay Talaadadii la soo dhaafay ka fuliyeen Koonfurta Somalia. Hadal ay AFRICOM xalay soo saartay ayey ku sheegeen inay duqeyntaasi ka dhacday agagaarka...
Mjournal :-Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ogolaaday in la joojiyo duulimaadyada diyaaradaha Being 737 Max 8 oo ah nooca diyaaradii dhawaan ku burburtay duleedka Magalada Addis Ababa ee Xarunta dalka Itoobiya. Arrintaan ayuu ku micneeyey Trump cabsi dhinaca amniga...